Warbixinta marin u helka | Booqo Hultsfred
Warbixinta marin u helka2020-10-26T12:04:15+01:00
Degmada Hultsfred ayaa ka dambeysa degelkan. Waxaan dooneynaa in dad badan intii suurtagal ah ay awoodaan inay adeegsadaan websaydhka. Dukumiintigaan wuxuu sharxayaa sida hultsfred.se ay u waafajineyso sharciga marin u helka adeegga dadweynaha ee dhijitaalka ah, wixii dhibaato ah ee helitaanka la og yahay iyo sidaad noogu soo soo gudbin karto cilladaha si aan wax uga qabanno.
La'aanta helitaanka ee visithultsfred.se
Waqtigan xaadirka ah, waxaan ka warqabnaa in aanan ku guuleysan in aan buuxino dhammaan shuruudaha ku jira WCAG ee qodobada soo socda, iyo kuwa kale.
Waxaa jira dukumiinti pdf ah oo shabakada ah oo aan la heli karin. Qaar ka mid ah feylasha pdf, gaar ahaan kuwooda waaweyn, ee ku jira websaydhka ayaa ah dukumiintiyo la marsiiyey oo aan lahayn wax aqrin kara maadaama ay ku saleysan yihiin dukumiintiyo aan dijital ahayn. Waxaan haysannaa fursad wax ku ool ah oo aan ku saxno tan.
Qaybo ka mid ah websaydhka ma buuxiyaan shuruudaha markay timaado, tusaale ahaan, isbarbar dhigga iyo qaabaynta.
Qaar ka mid ah sawirrada goobta ayaa ka maqan qoraalka alt.
Jadwallo badan oo websaydhka ku jira ma laha sharraxaadda miiska
Waxaa jira adeegyo elektaroonig ah iyo foomam aan buuxin mabaadi'da marin u helka.
Waxaan bilownay shaqo nidaamsan si aan wax uga qabano cilladaha helitaanka iyo tababarida tifaftirayaasha shabakadeena.
Nala soo xiriir haddii aad la kulanto caqabado
Waxaan si joogto ah ugu dadaalnaa inaan horumarino marin u helka websaydhka. Haddii aad ogaato dhibaatooyin aan lagu sharraxin boggan, ama aad aaminsan tahay inaannaan buuxin shuruudaha sharciga, noo soo sheeg si aan u ogaanno inay dhibaatadu jirto. Waxaad kala xiriiri kartaa xaruntayada xiriirka:
Telefoon: 0495-24 00 00
La xiriir hay'adda kormeerka
Awoodda maamulka dhijitaalka ah ayaa mas'uul ka ah kormeerka sharciga marin u helka adeegyada dadweynaha ee dhijitaalka ah. Haddii aadan ku qanacsanayn sida aan u maareyno aragtidaada, waxaad la xiriiri kartaa Maamulka Maamulka Dijital oo aad u soo sheegi kartaa.
Sidaan u tijaabinay goobta
Waxaan sameynay is-qiimeyn gudaha ah oo ah hultsfred.se. Qiimeyntii ugu dambeysay waxaa la sameeyay 20 Agoosto 2020.
Warbixinta waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay Sebtember 8, 2020.
Macluumaad farsamo oo ku saabsan marin u helka websaydhka
Websaydhkani wuxuu qayb ahaan u hoggaansamayaa Sharciga Helitaanka Adeegga Dadweynaha ee Dijital ah, cilladaha kor ku xusan awgood.